Amaholide apheka isidlo esishisayo kwesesibili > Ukudla ngesifo sikashukela
Lean izifundo zesibili
OKUQUKETHWE: ● Ama-apula aphakathi nendawo ayigeza ● ushukela o-1 inkomishi ● 1.5 ufulawa wendebe 1.5. Kuhlanzwa, uthathe isikhunta (kugcotshwe ngentambo. Amafutha) (usayizi wokubumba 26 cm) 2. Thatha amaqanda ama-5 + 1 ingilazi kashukela 3. Beat nge-mixer 4. Kungeziwe.
IZINGAZI: ● amaqanda ama-4 ● ama-200 g ka imajarini ● izinkomishi ezi-3 zobisi ● inkomishi e-1 kashukela ● i-100 g yemvubelo entsha (noma i-3 tbsp eyomile) ● iziqu ezimbili zikasawoti ● mayelana ne-1.5 kg. ufulawa ●.
Iresiphi yomgcinimafa ophakeme wawo wonke umama wasekhaya! Le ndlela yokuhlola ilungele kakhulu labo abangathandi kakhulu inhlama yemvubelo noma abasaba nje ukuyipheka.Ukuhlolwa kwe-kefir kufana kakhulu nemvubelo nokusuka kuyo.
Awukholwa, kepha kuthatha imizuzu eyi-10 kuphela! Izithako Ubisi 1 inkomishi Ushukela 1 inkomishi Ubisi 1 inkomishi Ibhotela 50 g Amanzi 1 tbsp. l Ukulungiselela Thela ushukela epanini bese wengeza amanzi.
Izithako: Isitshalo seqanda - i-anyanisi engu-4 kg - I-4cc izaqathi - ama-3 ama-pcs I-pepper yaseBulgaria - ama-3 ama-pc Amanzi (abilisiwe) - 0.5 izinkomishi Ushukela - izinkomishi ezi-0,5 Uviniga - 0.5 izinkomishi Garlic - 1 ikhanda Imifino eluhlaza - yokuthosa Usawoti - ku.
Lenten izitsha ezishisayo
Ukuzila yisikhathi lapho kufanele ushiye khona imikhiqizo yezilwane ekudleni kwakho. Futhi ababambelela kokudla okunempilo baze bakhethe nokudla okunciphile kwemenyu yabo empilweni yabo yonke. Into ukuthi izitsha ezingenamafutha, izindlela zokupheka ezitholakala kalula zokupheka nsuku zonke, ziwusizo kakhulu emzimbeni. Ngokuphikisana nombono oyiphutha, ukuzila okuthunyelwe ngeke kudingeke! Imenyu esekwe emithini yamakhambi iyenelisa impela, inempilo ngempela, futhi okubaluleke - inempilo.
Lapha sinikeza izivakashi ezijwayelekile nezivakashi zesayithi lethu isigaba sonke esizokusiza ukuthi ukhethe izitsha ezishisayo (izindlela zokupheka nsuku zonke) ezizokujabulisa ngokunambitha, ukusebenziseka lula ukubulawa!
Izifundo zesibili eposini
Ngakho-ke yini engadliwa ngokunamathela kumenyu enciphile? Izifundo zesibili ezingenantambo futhi kufanele zicebise futhi zihlambe! Futhi uma ucabanga ukuthi ngeke udle ama-meatballs eposini, khona-ke cishe ucishe wenza iphutha. Ngemuva kwakho konke, ungaziphekela ama-cutlets amangalisayo izaqathi, iklabishi, ne-zucchini. Futhi ngeke kube okumnandi kangako, kepha kube lusizo kakhulu kunodidi lwakudala.
Izifundo zesibili ezingenantambo zingalethwa:
isaladi yemifino efudumele
imifino eyosiwe noma eshisiwe
inhlanganisela yobhontshisi omnandi
ama-pancake emifino kanye nama-cutlets
zonke izinhlobo zokudla okugayiwe nezinhlamvu.
Lolu nje uhla oluncane lwalokho okungalungiswa kwesesibili kokuthunyelwe. Izinhlobonhlobo zemikhiqizo yezitshalo zinhle kakhulu kangangokuba isikhala esikhulu sabelwa indiza yokucabanga okucatshangelwe. Ufuna ukujabulisa amalungu omndeni ngokudla kwasemini? Yenza i-lobio noma amazambane abhakwe! Izingane nabantu abadala bayakujabulela ukudla izigaxa zethanga ngamakhowe. Abaningi bazothanda iklabishi neklabishi, i-semolina no-anyanisi. Futhi uma ufuna okuthile okunjengalokhu, bese ulungiselela i-risotto nge-feta ushizi noma i-pilaf yemifino kusuka elayisi okusanhlamvu okusanhlamvu, izaqathe, izindebe notamatisi. Futhi bheka ukuthi yiziphi izitsha ezishisayo (izindlela zokupheka ezinezithombe) ezisesigabeni sesayithi lethu. Sinezinto ezikhethiwe zokupheka okumnandi, ezinempilo nezilula!
Ukucabanga ngombuzo wokuthi yini ozokuphekela owesibili eposini namuhla, kubalulekile ukuthi unake amaphuzu athile. Izifundo zesibili ezishisayo ngokwesisekelo esifanele kufanele zihambisane futhi zihlangane nalokho okwakungokokuqala nakuphudingi.
Isibonelo, uma ukhonze isobho le-pea elokuqala, akufanele ulungiselele izitsha ezinciphile kusuka kubhontshisi namachwane wesibili. Amamenyu obhontshisi acebile angakhungathekisa imindeni. Uma okokuqala bekungobhontshisi, okwesibili kufanelekile ukuthumela izitsha zamazambane, imifino, amakhowe. Futhi, kunalokho, uma owokuqala ekhonza iborsch eluhlaza okotshani obomvu, ke owesibili ulungele impela i-lobio, i-chickpea paste noma i-pea porridge.
I-Porridge ithatha indawo ehlukile kwimenyu yeLenten! Ama-cereal asiza ekuphekeni ukudla okunamafutha. Futhi kukhona lapho ukusheshisa. Kwesibili ungakhonza iphalishi ngezithelo, amajikijolo, uju. Izinhlamvu ezinobilisiwe, ezintshontshiwe, ezihlumile zingaba isidlo esimcaba esihle esitsheni esikhulu. Kuhle kakhulu kuma-groats wokuzila. Lawa ama-pancake anjalo enziwe nge-buckwheat ebilisiwe, ilayisi, amabele, i-oatmeal.
Indawo ekhethekile kumenyu yeLenten ibekelwe amazambane! Ukusuka kulesi sitshalo sezimpande, ungapheka izitsha eziphambili eziningi ezimnandi, ezinempilo nezinempilo.
Ngaphezu kwalokho, amazambane "angadlala" eyedwa kwizifundo zesibili, futhi angasebenza njengokwengeza koqobo. Amazambane angabhakwa, athosiwe, abilisiwe, abilisiwe. Amazambane agcotshwe ngemifino eyosiwe - lokhu kungukukhetha okuhle kwesibili kokuthunyelwe! Ubhatata wezithelo ezinamakhambi kanye negalikhi - unambitha kakhulu, unempilo, unempilo. Ubhatata obilisiwe notamatisi, izaqathe kanye nopelepele wensimbi - kungani ungatholi okuthile kwemenyu engenamikhono? Ubhatata obhakwe ngo-foil ngamakhowe akusona nje isidlo esishisayo esimnandi sesibili. Le nketho ifanelekile ngokuphelele ekusebenzeni etafuleni lomkhosi.
Izifundo zesibili kokuthunyelwe zingaba ezimibalabala futhi zihlukahlukene! Into esemqoka ukukhombisa umcabango futhi uchithe isikhathi esincane kakhulu ekuzilungiseleleni nasekwenziweni okuhle.
Lenten izitsha eziphambili: izibonelo nge zokupheka
Nazi izibonelo ezimbalwa zokupheka ezingenasisekelo okuzoheha abalandeli abaningi bokudla abanempilo nalabo abakhethayo ukuzila ukudla.
Lesi sidlo siyojabulela ukuzila ukudla! "Ama-curls" we-kholifulawa abukeka eyangempela futhi enemibala. Isitsha esinjalo singafakwa etafuleni lomkhosi, sinikezwe izivakashi noma abendlu ngezinsuku zaphakathi nesonto. Indishi ilungiswa kalula, ayidingi ukusetshenziswa kwemali ngokweqile, imikhiqizo iyatholakala ukuthi ithengwe kunoma yiziphi izitolo zemifino, nezitolo ezinkulu.
Ukulungiselela ukuhanjiswa okungama-3-4 uzodinga:
1 ifoloko eliphakathi kakholiflower
isinkwa kusuka ezinhlobonhlobo unciphile of e-crackers, ufulawa noma bran - inkomishi ½
noma yimiphi imifino oyithandayo - ukunambitha
Amakhethini ka-2-3 kagalikhi
amanzi okupheka - 1-1.5 amalitha
uwoyela wemifino ukuthosa - 2-3 wezipuni.
Uma udla usawoti, engeza ukunambitha kule iresiphi.
Okokuqala udinga ukususa amaqabunga eziqongqothile eklabishi. Imfoloko yonke ibekwa embizeni yokupheka bese ithululelwa ngamanzi ukuze iklabishi imbozwe ngokuphelele ngoketshezi. I-pan kufanele isethwe ukushisa okuphakathi bese upheka kuze kube yilapho kususwa ukhuni - cishe imizuzu engu-20. Lapho nje amanzi eseqala ukubilisa, cisha umlilo, susa iklabishi bese ubeka ukupholisa endishini. Hlakaza iklabishi elipholile kuma-inflorescence. Thela uwoyela epanini nasekushiseni. Cwilisa i-inflorescence ngayinye ekubhanqeni nasefryni epanini kuze kube nsundu yegolide. Faka iklabishi elungile esitsheni esijulile bese ufafaza ngamakhambi oqoshiwe kanye negalikhi. Iphunga lesitsha esisele “libizela” ekhishini! Lesi isitsha esihle kakhulu, esihlwabusayo futhi esinamakha! Khonza iklabishi "Yokudla" njengesitsha eseceleni noma njengesitsha esikhulu esizimele.
Lesi sidlo sizojabulisa bonke abathandi be-exoticism nalabo abafuna ukuzama okuthile okusha, okwenziwe ngokuhlanganiswa okujwayelekile kwemikhiqizo. I-Mushroom nethanga sithela kufanelana nokudla okungenamafutha. Isitsha sinempilo kakhulu futhi asidingi izithasiselo ezinempilo.
ithanga - 200 amagremu
amazambane - izingcezu ezi-2-3
amakhowe (ama-champignons, amakhowe e-oyster, noma yikuphi ukudla) - 300 amagremu
ubisi lukakhukhunathi - inkomishi ½
itheniphu - ½ anyanisi ophakathi
imifino yokuhlobisa - ukunambitha
uwoyela wemifino - ama-2 ama-passerovka.
Usawoti ungezwa ukunambitha! Kepha ngaphandle kwalesi sakhi, indishi izophuma imnandi.
Cwecuza ithanga bese usika kube amashubhu amakhulu. Yenza okufanayo nezilimo eziyizigaxa zamazambane. Geza amakhowe uthathe izicucu ezikahle. Faka ithanga namazambane epanini, uthele amanzi ukuze ingaphezulu yemifino imbozwe kancane, bese uvula umlilo ohamba kancane. Ngenkathi imifino ibuthaka, udinga ukukudlulisa kancane u-anyanisi epanini bese uthosa amakhowe kancane. Lapho amazambane kanye nethanga cishe kuphekwe, kufanelekile ukungeza amakhowe no-anyanisi kubo. Konke kuhlangene kufanele kukhuculwe eminye imizuzu engu-15. Lapho amanzi esecishe washiya epanini, kufanelekile ukungeza ubisi lukakhukhunathi. Eminye imizuzu engu-5 ukwenza mnyama yonke into ndawonye futhi ucime umlilo. Phezulu indishi ngamakhambi afafazwe asikiwe kanye nesembozo. Kuthatha imizuzu eyi-10 ukuthi isidlo "sikutholile." Emva kwalokho, ungaphaka ithanga lesiphundu esimnandi nesanelisayo ngamakhowe nobisi lukakhukhunathi etafuleni.